NISA: Maxay Yihiin Diyaaradaha Dronis-ka Ee Ay Sirdoonka Soomaaliya Qabteen? - Xogside-news Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALI NEWS NISA: Maxay yihiin diyaaradaha Dronis-ka ee ay sirdoonka Soomaaliya qabteen?
NISA: Maxay yihiin diyaaradaha Dronis-ka ee ay sirdoonka Soomaaliya qabteen?
Waxaa tan iyo shalay soo baxayay warar sheegayay in diyaarado nuucoodu yahay kuwa aysan duuliyaha saarneyn lagu qabtay garoonka diyaaradaha Adan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Lamaaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankooda ilaa iyo imika war rasmi ah aan ka soo saarin diyaaradaha la qabtay.
Balse xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa BBC-da u sheegay in diyaaradahaasi oo ka kooban lix oo ah kuwa drones-ka uu isaga leeyahay.
Xildhibaanka ayaa ku eedeeyay hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka (NISA) in ay gacanta ku hayaan diyaaradahaasi oo uu sheegay inay yihiin kuwo laga leeyahay ujeeddo ganacsi.
Xildhibaanka oo wareysi gaar ah siiyay BBC ayaa sheegay in diyaaradahan u ugu talagalay in uu u isticmaalo dhanka hormarinta beeraha.
“Diyaaradahan aan duuliyaha lahayn wadanka waa ka buuxaan, dad horaa keenay. Aniga kuwa aan keenay waa kuwo ku shaqa leh hormarinta beeraha, biyaha iyo sahanka dhulka oo loogu talagalay mashaariicda hormarinta,” ayuu yiri mudane Sakariye.
Waxa uu intaas ku daray in diyaaradahan uu ka soo iibsaday shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, islamarkana uu bixiyay canshuurtii looga baahnaa, balse ay ku dhageen ciidamo ka socda hay’adda Sirdoonka.
“Diyaaradahan waxaan ka gatay shirkad Turki ah, waxayna ku soo dareen dad farsamo yaqaano ah oo ii xirxira, talaadadii hore ayaa garoonka la keenay markii aanu canshuurta bixinay oo qolyihii canshuurta dowladda ay furfureen, arkeen, ayna yiraahdeen mushkilo ma leh dalka waa gali kartaa canshuurta iska bixi. kadib ciidan Nisa ah ayaa yimid nimankii Turkiga ahaana way kaxeysteen diyaaradihii-na baabuur ayay ku rarteen,” ayuu yiri xildhibaan Sakariye.
Xildhibaanka ayaa sheegay in injineeradii Turkida ahaa la sii daayay, balse ay sirdoonka Soomaaliya wali haystaan diyaaradihii Drones-ka ahaa.
“Maalin bay ku haysteen godka jilicow ka bacdina waxaa la yiri waxba la idiinma haysto ordoo iska taga, nimankii way iska tageen dhulkoodii bay aadeen,” ayuu yiri.
Waxa uu mudanaha ka tirsan baarlamaanka sheegay in muddo kabadan hal isbuuc uu ka codsanayay in la siidaayo, balse aysan taasi wali dhacin.
“Toban maalmood ayaa la i warwareejinayay oo la i lahaa waxbo laguuguma hayo waa la siideynayaa, diyaaradahan waan u jeednaa inay kuwo rayid ah yihiin, markii ay muddo i lugoynayeen ayaan madaxwaynaha u tagay waan u sheegay wuu ka warqabay, ‘waa laguu sii deynayaa ayuu i yiri maalinta sabtida'”, ayuu yiri Sakariye.
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa farta ku fiiqay in loo ballan qaaday in Arbacadii shalay ahayd la sii deynayo diyaaradahani, balse aysan taasina dhicin.
“Axaddii ayaa waxaan is aragnay taliyaha Nisa labo maalmood fursad na sii Arbacada ayaan kuu siideynaynaa ayuu yiri, markii Arbacadii la gaarayna waxaan arkay iyada oo bannaaka yaaceysa oo aniga la i eedeynayo,” ayuu yiri.
Xildhibaanka ayaa sheegay in uu maxkamad geeyay kiiska la xiriira arrintan islamarkana uu jawaab ka sugayo waaxda garsoorka.
“Qareen ayaan u tagay, maxkamad ayaan ku furay ,maxkamad ayuu hadda kiiskii jiraa,” ayuu yiri xildhibaan Sakariye
Maxay yihiin diyaaradaha Dronis-ka beeraha?
Isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones-ka ee loo adeegsado beeraha ayaa sannadihii u dambeeyay ku soo badanayay caalamka.
Diyaaradahan ayaa waxaa loo adeegsadaa buufinta beeraha, waraabinta dalagga, bacriminta iyo waliba la socodka guud ee xaaladda beeraha.
Diyaaradahan ayaa waxaa sidoo kale loo adeegsan karaa buufinta cayayaanka, sida Ayaxa.
Tiknoolojiyadan cusub ayaa waxaa ay meesha ka saartay xooggii badnaa ee dadka tacbada beeraha ay galin jireen howlaha kobcinta dalagyadooda.
Muddooyiinkii u dambeeyay dalka Turkiga ayaa noqday mid ka mid ah waddamada sameeya diyaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones-ka.
Iyada oo uu Turkiga sameeyay diyaaradaha Drones-ka dagaalka oo ah kuwo si wayn looga baqo ayaa waxay hadanaa shirkadaha Turkiga soo saareen diyaarado kale oo beeraha loo adeegsan karo.
Dalka Soomaaliya way ku yar tahay xilligan adeegsiga diyaaradaha drones-ka, nooca beeraha.
Previous articleMaxay Kenya u xaraashaysaa diyaaradahan ay Soomaaliya lahayd?
Raiisul Wasaare Rooble oo qaabilay Danjiraha Dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya